Juventus oo Ka Adkaatay Kooxda Napoli – Radio Muqdisho
Kooxda S.S.C. Napoli ayaa waxaa garoonkeeda San Paolo 1-3 uga badiyay kooxda Juventus.
Kooxda Juventus ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 29-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Paul Pogba,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Miguel Britos ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Napoli.
Ciyaaryahan Martin Caceres ayaa daqiiqadii 69-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Juventus.
Ciyaaryahan Arturo Vidal ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedexaad u dhaliyay kooxda Juventus.
Kooxda Juventus ayaa sedax dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineyso horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 43-dhibcood,halka kooxda Napoli ay horyaalka uga jirto kaalinta afaraad,iyadoo leh 30-dhibcood.